Malunga Nathi-Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
I-Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd. yafunyanwa kwi-2006. Igxininise ekuphuculeni iteknoloji yomshini we-ice ukususela, kubandakanywa umatshini we-ice flake, umatshini we-ice tube, umatshini we-block block kunye nokunye.
Senza imisebenzi emihle kunye OEM / ODM for flake ice evaporators, oomatshini flake ice, oomatshini ityhubhu umkhenkce, oomatshini block ice.Iimveliso zethu zamkelwa ngokufudumeleyo ngamaqabane ethu oshishino kwihlabathi liphela.
Itekhnoloji yomatshini womkhenkce weFlake:
Senza ii-evaporators zomkhenkce ezineflake e-China, kwaye sithengisa ii-evaporators zomkhenkce zeflake kuninzi lwezinye iinkampani zoomatshini bomkhenkce baseTshayina, eziqhagamshela i-Herbin evaporators kunye neeyunithi zabo zokupholisa ukwenza oomatshini bomkhenkce be-turnkey flake ekuhlaleni kumazwe ahlukeneyo kwihlabathi jikelele.
Ngaphezu kwe 60% koomatshini bomkhenkce baseTshayina baxhotyiswe ngeHerbin flake ice evaporators.
I-Herbin flake ice evaporators sele isetyenziswe kwihlabathi jikelele.
Ngeli xesha, inkampani yakwaHerbin yaqala ukusebenzisa i-Chromed yesilivere yealloyi ukwenza umphunga ukusukela ngo-2009 ukuphucula i-thermal conductivity ye-ice evaporator yeflake.Olu hlobo lwe-alloy yesilivere yinto ekhethekileyo kakhulu, enelungelo elilodwa lomenzi weHerbin Ice Systems.Isixhobo esitsha siphucule i-thermal conductivity nge-40% xa kuthelekiswa nabanye oomatshini bomkhenkce baseTshayina, kwaye ikhusela ukonakala emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
Itekhnoloji yomatshini womkhenkce weTube:
Iinkqubo zeHerbin Ice ziqale ukufunda amava kumatshini womkhenkce weVogt ityhubhu ukusukela ngo-2009.
Sathenga iP34AL esetyenzisiweyo nge-20 kaJulayi, 2009 kwiplanti ye-Xiaobang Ice (Esona sityalo sikhulu somkhenkce eShenzhen).Siqhaqhe oomatshini bomkhenkce ityhubhu, kwaye sakopa nganye into nganye, njengomlawuli wokuqukuqela kwamanzi, inzwa yenqanaba lolwelo kwi-evaporator, inkqubo yokujikeleza kweoyile yecompressor, inkqubo yokubonelela ngolwelo olulumkileyo, iivalvu zoxinzelelo rhoqo, inkqubo esebenzayo yokuphelisa ukhenkce nayo yonke into.
Ngokusekwe kumava eVogt, saqala ukuvavanya kunye nokuphucula umatshini wethu womkhenkce ityhubhu ngo-2010.
Siba ngowona matshini ubalaseleyo womatshini womkhenkce eTshayina ngo-2011.
Itekhnoloji ephezulu, umgangatho ophezulu kunye nexabiso elihle lenza ukuba inkampani yaseHerbin ikhule ngokukhawuleza kwimarike yomatshini womkhenkce.
Itekhnoloji yomatshini wokuvala umkhenkce:
Phambi kowama-2009, sigxile kumatshini womkhenkce we-brine pool block yemveli.
Saqala ukwenza umatshini we-ice block othe ngqo wefriji ukusukela ngo-2010.
Lo matshini omtsha wetekhnoloji yebhloko yomkhenkce ugcina amandla, uzinzile.
Okwangoku, sibonelela ngoomatshini abalungileyo bokupakisha umkhenkce, amagumbi omkhenkce, amagumbi abandayo, izikhenkcezisi zamanzi, iinkqubo zamanzi acocekileyo, izitywini zeengxowa, oomatshini bokwenza ikhephu, oomatshini bokutshiza njalo njalo, Kwaye siyilungele loo nto.
(1) Ixabiso eliphambili le-HERBIN: Yenza ixabiso kubathengi kwaye udale inzuzo kuluntu!
(2) I-HERBIN ibambelela kwifilosofi yoshishino "Umgangatho wokuqala, uDumo kuqala, iNkonzo kuqala", iya kuqhubeka nokuqulunqa nokuphuhlisa, ukuzama ukuphucula ukukhuphisana kwamazwe ngamazwe kwezixhobo zokwenza umkhenkce, kwaye ibe ngumgangatho wehlabathi wokwenza umkhenkce. .
Bonke oomatshini bomkhenkce benzelwe ngokukodwa ukuba bomelele kakhulu, ukuze baphile kakuhle kakhulu ngexesha lokuhanjiswa ukusuka kumzi-mveliso wethu ukuya kwiziko lomthengi.Akukho kwaphulwa kwemibhobho, akukho ntanda-buzo kwiindawo zokuwelda, akukho nxalenye zikhululekileyo emva kokuhamba ngenqanawa elwandle yamazwe ngamazwe kunye nothutho ezindleleni.
Bonke oomatshini bomkhenkce baya kudlula uvavanyo lweyure ezingama-72 ngaphambi kokuba basiwe kubathengi.
UHerbin unikezela ngewaranti yeenyanga ezingama-24 kubo bonke oomatshini bomkhenkce.
Sikwanalo neqela lenkonzo emva kokuthengiswa kobuchwephesha ukunceda abasebenzisi ukufaka oomatshini bomkhenkce.Inkonzo yokubonisana kwi-intanethi yeyasimahla ukuphakamisa ixesha elide.
Abantu kwiiNkqubo ze-Ice zeHerbin:
(1) UHerbin umseki wenkampani, kwaye wasebenzisa igama lakhe ukubiza inkampani.UHerbin ngoku ungumphathi jikelele wenkampani kwaye usasaza umsebenzi ophambili wenkampani malunga nokwenza.
(2) UMike Li nguMlawuli weNtengiso, ophethe ukuthengiswa kwenkampani kwiimarike zaseTshayina naphesheya.UMike unamava okuthengisa kumatshini womatshini womkhenkce iminyaka engaphezu kwe-10, ngaphambi koko wafumana isidanga se-HAVC Major kwiYunivesithi yaseZhanjiang Ocean.
IYunivesithi yaseZhangjiang Ocean idume ngeHAVC Major kuMazantsi eTshayina.
Ukuqinisekiswa koomatshini beHerbin Ice.
Bonke oomatshini bomkhenkce baseHerbin banesiqinisekiso se-CE, SGS, UL......
Umatshini womkhenkce kaHerbin unamalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwama-70, njengelungelo lomenzi wezinto ezintsha ze-flake ice evaporator, umatshini womkhenkce ophuphumayo, oomatshini bomkhenkce ityhubhu njalo njalo.
(1) Amasebe e-HERBIN abandakanya: iSebe loPhuhliso, iSebe lokuThenga, iSebe lokuVelisa, iSebe loMgangatho, iSebe lezoShishino, kunye neSebe leNkonzo emva kokuthengisa.
(2) ISebe loPhuhliso: Linoxanduva lokuphucula umgangatho womatshini womkhenkce, ukuphuculwa kobuchwepheshe bomkhenkce, ukuphuculwa kokonga umbane njalo njalo;
Isebe lokuthenga: Ukuthengwa kwezixhobo ezinxulumeneyo kunye nezixhobo zoomatshini bomkhenkce, ezifana necompressor, iinqanawa zoxinzelelo, iivalvu zokwandisa, i-condenser, njalo njalo.
Isebe lezeMveliso: Linoxanduva lokuvelisa oomatshini bomkhenkce kunye nezixhobo ezinxulumeneyo.
iSebe loMgangatho: Jonga umgangatho woomatshini bomkhenkce.Kwaye ujonge ukusetyenziswa kombane kumatshini ngamnye.
ISebe lezoShishino: Thengisa izixhobo zoomatshini bomkhenkce abafanelekileyo kubathengi
Isebe lenkonzo emva kokuthengisa: Linoxanduva lofakelo, ukugcinwa koomatshini bomkhenkce abathengiweyo, kunye nenkonzo ye-intanethi kuyo yonke imibandela ephathelele koomatshini bokwenza umkhenkce.
Ukwaziswa kwamandla emveliso yenkampani
Ukuqaliswa kwezixhobo kunye nobuchwepheshe
Inkampani yakwaHerbin ineentambo zayo ezi-3 ezithe tyaba ezithe tye, iileyile ezinkulu ezi-2 ezithe nkqo, umatshini wokuwelda ozenzekelayo opheleleyo, oomatshini bokuwelda abali-15, oomatshini bokusika iipleyiti ezi-3 kunye nomatshini wokugoba, indawo enye yokuvasa iasidi, ichibi le-Nickel enye&i-chrome, itonela enye yonyango lobushushu, enye. umatshini wokuzalisa ipolyurethane(PU).........
Iileyile kunye nabasebenzi abanamava baqinisekisa i-flake evaporators yomkhenkce neyona ngqukuva ingcono.
Unyango lobushushu lobuchwephesha luqinisekisa ukuba ii-evaporator ze-ice flake azikho malformation emva kokusetyenziswa ixesha elide.Ukuvaswa kweasidi egqibeleleyo kunye ne-nickel & ne-chrome plating ivumela ii-evaporators zisebenze ngokuzinzileyo ngaphezulu kweminyaka engama-20.
Sinabantu abangaphezu kwama-50 abasebenza ngobuchwephesha ngezixhobo ezikhankanywe ngasentla, kwaye sinokwenza iiseti ezingaphezulu kwe-5-20 yee-evaporator zomkhenkce ezinqabileyo mihla le.
Sineenjineli ezi-2 zokusetyenziswa koomatshini bomkhenkce abancinci aba-2, iinjineli ezi-2 zoomatshini abakhulu bomkhenkce obunomthamo omkhulu, iinjineli ezi-3 zoomatshini bomkhenkce ityhubhu kunye nabanye oomatshini bomkhenkce abanobuchwepheshe obuphezulu.
Ngokwe-avareji, veki nganye, siya kuthumela iiseti ezingama-200 zomthamo omncinci wokusetyenziswa koomatshini bomkhenkce bomkhenkce.Iiseti ezi-5 ukuya kwezi-10 zoomatshini bomkhenkce be-flake abakhulu kuno-5T/ngosuku.Iiseti ezi-3-5 zoomatshini bomkhenkce ityhubhu abakhulu kune-3T/ngosuku.
UHerbin uye wakha ubudlelwane obuqinileyo kunye nabanikezeli becandelo, njengeBitzer, iFrascold, iRefcomp, iDanfoss, iCopeland, i-Emerson, i-O & F, i-Edeni, njalo njalo.
Oomatshini bomkhenkce beHerbin basetyenziswa kakhulu kwihlabathi jikelele.
Umzekelo, iipesenti ezingama-95 zoomatshini bomkhenkce beMade-in-Turkey baxhotyiswe ngeHerbin flake ice evaporators ziinkampani zalapha zaseSogutma.
Ama-65% oomatshini bomkhenkce abenziwe e-China baxhotyiswe kunye ne-Herbin flake evaporators yomkhenkce.
I-30% yeteknoloji ephezulu ye-tube ye-ice machines e-East Asia ivela kwii-Herbin Ice Systems, ezifana nePhilippines, i-Indonesia, iMalaysia, iVietnam, iCambodia, iLaos.....
Iityhubhu zomkhenkce zityiwa njengokutya kubomi bemihla ngemihla kula mazwe.
I-80% yezikhephe zokuloba zaseTshayina zixhotyiswe ngoomatshini bomkhenkce be-Herbin olwandle.
UHerbin ngoyena matshini mkhulu wentengiso we-ice flake umthengisi kwiCarrefour, Wal-Mart, Tesco, Jiajiayue, kunye nezinye iivenkile ezinkulu zeChain.Iiflake zomkhenkce zisetyenziselwa ukuthengisa ukutya kwaselwandle, intlanzi, ukuhlangana njalo njalo.
Umatshini omkhulu womkhenkce weHerbin kunye noomatshini bomkhenkce ityhubhu basetyenziswa kakhulu yiSanquan Foods, iShineway Group, kunye nezinye izityalo ezilungisa ukutya.
Inkampani yeHerbin inommeli kunye neeofisi kuMbindi Mpuma, eMzantsi Afrika, eMpuma ye-EU, eMntla EU njalo njalo.
1. Umboniso wemveliso
Iimveliso zihlulwe kwiimveliso zamva nje, iimveliso ezikhethekileyo kunye neemveliso eziqhelekileyo.
(1) Iimveliso zamva nje: Iimveliso zethu zamva nje ngoomatshini bomkhenkce bonga amandla.Ngokusebenzisa imathiriyeli emitsha ukwenza ii-evaporator zomkhenkce zeflake, oomatshini bethu bomkhenkce beflake basebenzisa kuphela i-75KWH yombane ukwenza yonke itoni e-1 yeeflakes zomkhenkce (Ngokusekwe kwi-30C ambient kunye ne-20C yamanzi angenayo).Abanye oomatshini bomkhenkce baseTshayina badla okungenani i-105KWH yombane ukwenza yonke itoni e-1 yamaqhekeza omkhenkce.
Sikwanoomatshini bomkhenkce abazizikhukula abathengiswayo, kwaye basebenzisa i-65KWH yombane ukwenza yonke itoni enye yomkhenkce ngokomndilili.
(2) Iimveliso ezikhethekileyo: Sinexabiso elikhethekileyo le-5T / imini yomatshini we-ice tube ngo-2020. Kwaye sihlala sinalo mzekelo kwisitokhwe.Sinokuhlala sithengisa i-5T / imini yomatshini we-ice tube ngexabiso elihle kwihlabathi, kwaye zisesitokhweni.Sifuna kuphela iintsuku ezili-18 zokwenza umatshini omtsha we-5T/day ityhubhu yomkhenkce ukusuka kwi-0.
(3) Iimveliso ngokubanzi: Oomatshini bomkhenkce abarhweba ngokubanzi banamandla amancinane, kwaye sigcina isixa esikhulu soomatshini bomkhenkce abancinci esitokhweni.Zizinzile kwaye zinexesha elide kakhulu lenkonzo, zithengiswa njenge-hot-dog yonke imihla.
2. Inkcazo ngokubanzi yemveliso
Ukusetyenziswa kwezorhwebo oomatshini bomkhenkce abancinci bexabiso elincinci basetyenziswa kakhulu kwivenkile enkulu, kwindawo yokutyela, ukugcina ukutya kusitsha.
Oomatshini abakhulu bomkhenkce/oomatshini bomkhenkce betyhubhu badla ngokusetyenziswa kwizityalo ezilungisa ukutya.Kwaye umkhenkce wongezwa ekutyeni ngokuthe ngqo ngexesha lokudibana.
Oomatshini abakhulu be-ice flake kunye noomatshini bomkhenkce ityhubhu bakwazeshishini lokuthengisa umkhenkce.Izityalo zomkhenkce zithengisa umkhenkce oshushu kubantu abalobayo, okanye bathengise iityhubhu zomkhenkce ezingxoweni kwikofu/kwiibhari/kwiihotele/kwiivenkile zesiselo esibandayo/kwiivenkile njalo njalo.
Oomatshini bethu bomkhenkce basetyenziswa ngokubanzi kwivenkile enkulu, ukucutshungulwa kwenyama, ukutya okuseManzini, ukuxhelwa kweentaka, ishishini lesikhumba, ishishini lemichiza yeDayi, Ukunciphisa amaqondo obushushu eMgodini, kwikhemesti yeBio, iilabhoratri, indawo yonyango, ukuloba elwandle, iiprojekthi zokwakha ikhonkrithi njalo njalo. .
Ngaphandle kobuchwephesha obutsha, oomatshini bethu bomkhenkce bangama-30% ukonga amandla ngakumbi kunabanye oomatshini bomkhenkce baseTshayina.Ukuba umsebenzisi ukhetha umatshini wam we-ice 20T/day flake, uya kuchitha i-USD 600,000 ngaphantsi kwibhili yombane kwiminyaka engama-20.Ukuba ukhetha omnye umatshini womkhenkce waseTshayina, uya kuchitha i-USD 600,000 ngaphezulu kwityala lombane kwaye akafumani nto.Umgangatho ofanayo womkhenkce, kunye nomlinganiselo ofanayo we-ice flakes.
Oomatshini bethu bomkhenkce ityhubhu baphuhliswa ngokusekwe kwiinkqubo zomkhenkce ityhubhu yeVogt.Banolawulo olugqibeleleyo lwenqanaba lolwelo kwi-evaporator, unikezelo lolwelo olulumkileyo, ukujikeleza kweoyile egudileyo, inkqubo esebenzayo yokuqhaqha, kwaye akukho sikhenkcisi solwelo sibuyela kwicompressor.........
Yonke loo misebenzi ineenkcukacha yenziwe kakuhle kwaye uya kuba noomatshini bomkhenkce bomkhenkce abaphuma kwiHerbin Ice Systems.
Sinoomatshini bomkhenkce abanomgangatho waseTshayina, umgangatho we-EU, umgangatho wase-USA.....
Kumatshini we-ice kunye ne-EU kunye ne-USA standard, imibala yocingo kufuneka ilandele imigaqo ye-CE, i-receiver ye-liquid ixhotyiswe ngevalve yokhuseleko kunye ne-valve ineziphelo ezi-2, zonke iinqanawa zoxinzelelo zine-PED certification.........
Ukuqinisekisa ixesha elide lenkonzo yoomatshini, sihlala sicebisa abathengi ukuba bathenge iindawo ezisecaleni kunye noomatshini.Iimpompo / iimoto / izinzwa / abafowunelwa / iireyilayi ziyafumaneka ngamaxabiso amahle kakhulu, ngokufanayo nokuba sihlawula malini kubaboneleli bethu.
Sipakisha oomatshini bomkhenkce kwiibhokisi zomthi eziqhelekileyo, ezenziwe ngeepaneli ezifunxiweyo.Zamkelekile kuwo onke amazwe ehlabathini jikelele.
Oomatshini baya kuqiniswa kakuhle kakhulu kwiibhokisi zokhuni, okanye kwiibhokisi.Siza kwenza ngononophelo yonke imisebenzi eyimfuneko ukunqanda umonakalo obangelwe kukungcangcazela, ukushukuma endleleni ukusuka kumzi-mveliso ukuya kwindawo yabathengi.
Iifreyimu zetsimbi ziqiniswa kwaye imibhobho iphindwe kabini.Ezinye iinkampani zaseTshayina azize zikuthathele ingqalelo oku.
Abathengi kufuneka bathathe imifanekiso ukubonisa iigeji zoxinzelelo okokuqala emva kokuba befumene oomatshini bomkhenkce.Ukuba oomatshini baphuke imibhobho, ukuqhekeka, iingxaki zokuvuza kwerhasi, siya kuhlawula ukulahlekelwa kwabo.